Akanyanya Mucheka Mureza Mira- Kutanga Kugadzira uye Fekitori | Jesson Mureza Arts & Crafts
Iyo Yakatwasuka Fabric Banner Stand inovandudzwa kubva kune echinyakare yakatwasuka kuratidzwa. Zvirinani kuratidza mhedzisiro uye zvimwe sarudzo.
Email kwatiri tenga izvozvi
Ratidza Zvako Zvigadzirwa uye Mhando neimwe nzira
Iwo machira emabhena anomira ari kugamuchira mukurumbira uri kukura nekuda kwekucheka kwayo kuri nyore uye zvine simba zvakadhindwa grafiki. Yakatwasuka machira akamira, akafanana nemupumburu wakasimudza mureza mumaonero, ndiyo imwe nzira yakanaka kune inowanzo shandiswa kupeta mureza. Iyo yekunze yakatwasuka jira inomira ine yakasimba uye yakasimba yakasimba, inoita kuti imire yakamira kunyangwe mune mamwe mazuva emhepo.
Micheka Yakasimba Inoita Kuti Unakidzwe Nekushandisa Kusingaperi
Mucheka unoshandiswa kugadzira machira akamira akareruka uye anogona kupetwa, izvo zvinoita kuti zvive nyore kurongedza nekutakura. Panguva imwecheteyo, jira, kusiyana nezvimwe zvinhu, rinogona kuwachika uye kushandisa kwenguva yakareba.
240g Kunetseka Mucheka
280g Kuvharidzira Mucheka
Kupa Rako Rako uye Bhizinesi nenzira yakatwasuka
Paunenge uchidhinda pamachira, pane zvingasarudzwa zviviri kwauri: yega-mativi uye maviri-mativi mifananidzo. Unogona kusarudza mhando yakakodzera kwazvo kuti uwedzere kuratidza kwako kumberi. Kana iwe uine bhajeti shoma, iwe ungafarire iyo yakatarisana yakadhindwa graphic. Nekudaro, kana iwe uchida kufumura mameseji ako kusvika padanho rakakura, iro rakaprindwa jira jira rinomira rakanakira iwe.
Anochinjika Mucheka Mureza Mira yeakasiyana Masayizi
Iyi jira mireza mireza ndeemhando dzakasiyana uye inogona kushandiswa mune dzakawanda nguva. Kana iwe uine yakashomeka yekushambadzira nzvimbo, saka 2ft jira bhana rinoshanda. Nekudaro, kana iwe uchida kugadzira inokwezva kumashure, unogona kusarudza imwe ye5ft muhukuru. Kana iwe usina chokwadi kuti ndechipi chakanakira chiitiko chako, chingotisiya isu email uye nyanzvi yekutengesa rep yako ichakubatsira nazvo.
Mucheka Pop Up Ratidza
Pop Up Ratidza
Pop Up Ratidza Kumira
10 × 10 Yakazara Ruvara Rakadhindwa Kushambadzira Tende
10 × 20 Tsika Pop Up Tende
10 × 15 EZ Up Instant Canopy Tende
Mucheka Banner Mira- Yakajairwa